Jan Dara: The Finale (mmsub)
by CHANNEL+ August 06, 2020
(18+) Jan Dara: The Finale မွနျမာစာတနျးထိုး
jandara :The Finaleဟာ အရငျ Jandara the begining ရဲ့ မပွီးသေးတဲ့ အဆကျ ဖွဈပွီး အရငျ ဇာတျကားထကျ ပိုစိတျဝငျစားစရာ ကောငျးလာပါတယျ။ ထိုငျးနာမညျကွီးဝတ်ထုကို ရုပျရှငျပွနျရိုကျထားတဲ့ ဒီဇာတျကားလေးဟာ drama နဲ့ လိငျအသားပေး ဇာတျကား ကောငျးလေးတဈကားဖွဈပါတယျ
ဂနျြဒါရာ အနနေဲ့အသကျကွီး လာပွီး သူ့အိမျတျောကွီးကို ပွနျလာခဲ့တယျ။ သူ့အဖေ အရငျးဟာ ဘယျသူဘယျဝါ ဆိုတာ ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့ပွီးမှပွနျလာတာပါ။ သူ့အနနေဲ့ ကလဲ့စားခွပွေီး Luang Vissanun-decha ရဲ့ လုပျပိုငျခှငျ့တှကေို ပွနျလညျ ခဖြေကျြဖို့ ကွိုးစား လာပါတော့တယျ။
အသေးစိတျ ထပျပွောပွရရငျတော့ အိမျကစှနျ့ခှာခဲ့ရတဲ့ Jan Daraဟာ ကြေးလကျရှာတဈရှာမှာ အဘှားဖွဈသူနဲ့ သှားအခွခေနြထေိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ Janရဲ့ ညီမနှဈဝမျးကှဲ ကလညျး ပွဿနာတဈခုနဲ့ ကွုံတှလေ့ာရပါတယျ။ ဒါကို Janက အခှငျ့ကောငျးယူ ပွီး လကျစားခဖြေို့ ကွိုးစားတာပါ။ သူ့ဘဝကို ရှငျလကျြငရဲကအြောငျ လုပျခဲ့တဲ့ လူတှကေိုပေါ့။
ကဲ…..ခဈြခွငျးမတ်ေတတရား တှေ ကာမဂုဏျတှေ သူငယျခငျြးရဲ့ ပံပိုးမှုတှကေ သူ့ကို ရှငျလကျြသစေခေဲ့တဲ့အရာတှကေို ပွနျကလဲ့စားခွေ ရာမှာ ထောကျပံ့ပေးနိုငျပါ့မလား? လကျစားခွေ ဖို့ ဘယျလို အခှငျ့အရေး တှေ ရခဲ့သလဲ? ဘယျလို စီမံ ခဲ့သလဲဆိုတာကတော့....
(18+) Jan Dara: The Finale မြန်မာစာတန်းထိုး
jandara :The Finaleဟာ အရင် Jandara the begining ရဲ့ မပြီးသေးတဲ့ အဆက် ဖြစ်ပြီး အရင် ဇာတ်ကားထက် ပိုစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလာပါတယ်။ ထိုင်းနာမည်ကြီးဝတ္ထုကို ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ drama နဲ့ လိင်အသားပေး ဇာတ်ကား ကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်
ဂျန်ဒါရာ အနေနဲ့အသက်ကြီး လာပြီး သူ့အိမ်တော်ကြီးကို ပြန်လာခဲ့တယ်။ သူ့အဖေ အရင်းဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆိုတာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမှပြန်လာတာပါ။ သူ့အနေနဲ့ ကလဲ့စားခြေပြီး Luang Vissanun-decha ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို ပြန်လည် ချေဖျက်ဖို့ ကြိုးစား လာပါတော့တယ်။
အသေးစိတ် ထပ်ပြောပြရရင်တော့ အိမ်ကစွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့ Jan Daraဟာ ကျေးလက်ရွာတစ်ရွာမှာ အဘွားဖြစ်သူနဲ့ သွားအခြေချနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ Janရဲ့ ညီမနှစ်ဝမ်းကွဲ ကလည်း ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ ကြုံတွေ့လာရပါတယ်။ ဒါကို Janက အခွင့်ကောင်းယူ ပြီး လက်စားချေဖို့ ကြိုးစားတာပါ။ သူ့ဘဝကို ရှင်လျက်ငရဲကျအောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ လူတွေကိုပေါ့။
ကဲ…..ချစ်ခြင်းမေတ္တတရား တွေ ကာမဂုဏ်တွေ သူငယ်ချင်းရဲ့ ပံပိုးမှုတွေက သူ့ကို ရှင်လျက်သေစေခဲ့တဲ့အရာတွေကို ပြန်ကလဲ့စားခြေ ရာမှာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါ့မလား? လက်စားခြေ ဖို့ ဘယ်လို အခွင့်အရေး တွေ ရခဲ့သလဲ? ဘယ်လို စီမံ ခဲ့သလဲဆိုတာကတော့....